Koobka Aduunka Oo Maanta Ka Furmaya Wadanka Ruushka Iyo Bandhigyada Ay Samaynayaan Taageerayaashu+Sawiro
(Hadhwanaagnews) Thursday, June 14, 2018 14:28:11
Diyaar garaw iyo dedaal dheer ka dib indhaha caalamka ayaa ku jeesan doona wadanka Ruushka oo ay maanta si rasmi ah uga furmayaan tartanka ugu xiisaha badan kubada cagta ee Koobka Aduunka.
32 dal oo ka kala yimid qaaradaha kala duwan ee aduunka ayaa ku tartami doono 64 ciyaarood oo la ciyaari doono tartanka koobka aduunka, iyada oo tartankaasi uu maanta si rasmi ah uga furmi doono garoonka Luzhniki Stadium ee magaalada Moscow.
Boqolaal ka mid ah taageerayaasha kubada cagta ee ka kala yimid wadamada ka qayb galaya
koobka aduunka ayaa goob joog ka noqonaya xaflad balaadhan oo lagu furayo tartankaasi, iyada oo ay ciyaarta ugu horaysana wada yeelanayaan wadamada Sucuudiga Iyo Ruushka.
Taageerayaasha xulalka Mexico, Costa Rica, Colombia, Peru iyo Argentina ayaa buux dhaafiyey shaaracyada magaalada Moscow ee wadanka ruushka iyada oo ay jiraan taageerayaal tiro yar oo ka socda wadanka Sucuudiga.
Taageerayaasha ayaa wadooyinka magaalada Moscow ku soo bandhigaya qoob ka ciyaar ay ugu dabaal dagayaan furitaanka tartanka koobka aduunka, iyada oo ciyaarta furitaanka ay daawan doonaan taageerayaal lagu qiyaasay 80,000.